Jiri CCI nke ọma na ozi-e
Edere site Tranquillus | Jan 12, 2022 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ị nwere ike iji ọtụtụ afọ na-eziga ozi site na mail na-enweghị mgbe ọ ga-amalite na "CCI". Agbanyeghị, ọ bụrụ na ejiri email ahụ na ntọala ọkachamara, ịmara uru ya na ojiji ya bụ ihe achọrọ. Nke a na-eme ka o kwe omume iji ya mee ihe nke ọma. Ya mere, ọ bụrụ na akụkụ ndị na-ezipụ na ndị nnata na nkụnye eji isi mee na-adị mfe nghọta. "CC" nke pụtara carbon oyiri na "CCI" nke pụtara na-adịghị ahụ anya carbon oyiri, dị obere. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ihe mkpọkpọ okwu a na-akpalite.
Kedu ihe oyiri carbon kpuru ìsì na-ezo aka?
Enwere ike ịhụ nnomi carbon dị ka ụtụ maka ezigbo oyiri carbon nke dị adị tupu e kee ihe nbibi nke na-enye ohere idowe ihe nṅomi nke akwụkwọ. Ọ dị ka mpempe akwụkwọ okpukpu abụọ nke etinyere n'okpuru akwụkwọ isi wee were ihe niile ị na-ede ka ị na-aga. A na-eji ya eme ihe maka eserese dịka ederede. Ya mere, a na-etinye ya n'etiti mpempe akwụkwọ abụọ, nke nke dị n'okpuru ya kpamkpam, ga-abụ nke oyiri nke dị n'elu. Ọ bụrụ na taa anaghị eji omume a eme ihe ọzọ na ọbịbịa nke teknụzụ ọhụrụ. Akwụkwọ ndekọ aha na-eji usoro a na-emekarị iji guzobe akwụkwọ ọnụahịa nwere mbipụta.
Uru nke CCI
"CCI" na-enye gị ohere izochi ndị nnata gị na "To" na "CC" mgbe ị na-eme ka otu ziga. Nke a na-egbochi azịza nke ụfọdụ ndị ọzọ ịhụ. Ya mere, a na-ewere "CC" dị ka oyiri nke ndị nnata niile na onye zitere ya na-ahụ. Ebe "CCI", dị ka okwu a na-adịghị ahụ anya na-egosi, na-egbochi ndị nnata ndị ọzọ ịhụ ndị nọ na "CCI". Naanị onye zitere ya ga-enwe ike ịhụ ha. Nke a dị mkpa maka ọrụ ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa, na-enweghị azịza na-ahụ onye ọ bụla.
GỤỌ Usoro ide ihe na usoro ọgụgụ
Gịnị kpatara eji CCI?
Site na izipu ozi-e na "CCI", ndị nnata na ngalaba a anaghị apụta. Ya mere, ojiji ya nwere ike ịkpali site n'ịkwanyere data nkeonwe ùgwù. Kedu ihe dị mkpa na gburugburu ọkachamara. N'ezie, adreesị ozi-e ahụ bụ ihe mejupụtara data nkeonwe. Dị ka nọmba ekwentị mmadụ, aha zuru ezu ma ọ bụ adreesị. Ị nweghị ike ịkekọrịta ha dịka ịchọrọ na-enweghị nkwenye nke ndị ọ metụtara. Ọ bụ iji zere iyi egwu ndị a niile gbasara iwu na ikpe ka a na-erigbu "ICC". Tụkwasị na nke a, ọ nwere ike ịbụ ngwá ọrụ nchịkwa dị mfe nke na-enye ohere ịnweta data dị iche iche site na ọtụtụ ndị na-eweta ihe na-enweghị ha na-ekwurịta okwu. Otu ihe ahụ dịkwa maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọtụtụ ndị ahịa, wdg.
Site n'echiche azụmahịa naanị, izipu ozi ịntanetị buru ibu na-ejighi "BCC" nwere ike ịnye asọmpi gị nchekwa data na efere ọlaọcha. Naanị ha ga-eweghachi adreesị ozi-e nke ndị ahịa na ndị na-ebubata gị. Ọbụna ndị obi ọjọọ nwere ike zuru ụdị ozi a maka aghụghọ aghụghọ. Maka ihe ndị a niile, iji "CCI" fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ndị ọkachamara.
Jiri CCI nke ọma na ozi-e January 11th, 2022Tranquillus
gara agaNtụgharị uche na ọgwụ na 2021: otuto nlekọta?
-esonụOkwu mmalite na Statistics nwere R
Họrọ usoro nkwanye ùgwù na-ejikọta ntinye aka na ọkachamara
Ide ihe nke ọma, nkà dị mkpa!
Ihe niile ịchọrọ ịma banyere ide ederede na ọrụ